Manchester United oo qarka u saaran inay Kooxda Liverpool ku garaacdo saxiixoodii ugu horreeyey xagaaga – Gool FM
(Manchester) 07 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay Liverpool ku garaacdo saxiixa difaaca RB Leipzig ee Ibrahima Konate xagaagan.
Kooxda Tababare Jurgen Klopp ayaa la aaminsan yahay in difaacan Faransiiska ah uu u noqon doono saxiixooda ugu horreeya suuqa soo socda, xitaa iyadoo agaasimaha ciyaaraha ee Leipzig ee Markus Krosche uu dhowaan hoos u dhigay wararka sheegaya in xiddigooda uu u dhaqaaqayo garoonka Anfield.
Sida Liverpool oo kale Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale doonaya inuu difaac dhexe oo cusub ku soo daro safkiisa xagaagan, Konate ayaana ah ciyaaryahan kale oo ku jira liiska xddigaha bartilmaameedka u ah Red Devils.
Difaacyada kale ee dhexe oo ay doonayso Man United waxaa ka mid ah midka Villarreal ee Pau Torres iyo kan Sevilla ee Jules Kounde, laakiin Warsidaha Eurosport ayaa warinaya in haddii Man Utd ay ku guuldarreysato la soo wareegista labada difaac ee ka ciyaara La Liga, waxa ay dareenkeeda u weecin doontaa Konate.
21-sano ayaa kooxda reer Jarmal ugu qiimeysan adduun dhan 34 milyan oo gini, waxaana loo ogolaan doonaa inuu ku biiro kooxdii uu doono haddii ay ku helaan qiimaha ku habboon.
Konate, kaasoo la dhibtoonaya dhaawac canqowga ah xilli ciyaareedkan ayaa kaliya saftay 10 kulan oo horyaalka Bundesliga, waxaana uu dhaliyey hal gool kulankii ay kooxdiisa 3-0 kaga adkaatay Freiburg bishii November ee sanadkii hore.